Maitiro Ekutangisa Inobudirira Email Siginecha Kushambadzira (ESM) Campaign | Martech Zone
Kana iwe uri kushandira kambani ine vanopfuura mumwe mushandi, pane mukana wekambani yako kushandisa masiginecha emaimeri kubata uye kutyaira kuziva, kuwana, kusimudzira, uye zvirongwa zvekuchengetedza asi uchizviita nenzira isiri yekuvhiringidza. Vashandi vako vari kunyora nekutumira maemail asingaverengeke zuva rega rega kumazana, kana zvisiri zviuru, zvevanogamuchira. Izvo zvivakwa mune yega 1: 1 email iyo inosiya yako email server iri mukana unoshamisa uyo usingawanzotora mukana.
E-mail yega yega inotumirwa nemushandi ine mukana wekunyorwa nemasaini akakosha, pamwe nekupa kufona-ku-chiito kutyaira kuziva nezve mibairo, zvigadzirwa, masevhisi, nezvimwewo izvo izvo zvaunotarisira kana vatengi vangangodaro vasingazive. Mhinduro ndeyekuisa pakati uye kugadzira zano rakatenderedza kutumira masiginecha emaimeri kukambani yako.
Chii chinonzi Email Signature Kushambadzira (ESM)?
Email Signature Kushambadzira (ESM) ndiyo tsika yekushandisa yako email siginicha yezvinangwa zvekushambadzira senge kuwedzera chiratidzo chiziviso uye kugadzirisa iyo CTR yebhizinesi rako rekusvitsa nekutengesa emaimeri.
Maitiro Ekumhanyisa Yakabudirira Email Siginecha Kushambadzira Campaign
Kubatanidzwa kweHofisi Kwakakosha
Email masiginecha anowanzo kudzorwa nevashandi vemuno uye akajairika mabhizimusi mapuratifomu seGoogle kana Microsoft Office havana kugona kubata nepakati fomati yeemail yemumwe munhu. Pese panenge paine mukaha wakaita seizvi, nekutenda mazano matsva apinda mumusika - mumwe mutungamiri aripo Newoldstamp. Newoldstamp ipuratifomu yepakati yekugadzirisa masiginecha evashandi uye kubatsira timu yako kunatsiridza kutaurirana netarisiro uye vatengi.
Newoldstamp inogadzirisika yakazara mhinduro isingade zviito kubva kuvashandi vako. Pushira shanduko dzese kubva kudhibhodhi redu zvakananga kune yavo email email mutengi. Otomatiki sync data kubva kuAlex Directory kana Google Workspace (Yaimbova G Suite) Dhairekitori yekugadzira masiginecha anoenderana netemplate imwe.
Kubatsira kweEndaneti Siginecha Kushambadzira
Zvakanakira kushambadzira siginicha yeemail ndekuti masangano anogona:
Streamline brand-inowirirana masiginecha emaoko kune vese vashandi vekambani vanoteedzera ako marongero.
Wedzera kushambadzira nekutengesa shanduko kuburikidza neyako bhizinesi email kutaurirana uye kumhanyisa email siginecha mabhena emakampeni.
Manage ese emaemaini masiginecha kubva kune rimwe dashboard. Kurumidza uye nyore email siginecha yakamiswa.
Sanganisa siginecha yako mushe mushe pamwe nevakuru maemail vatengi uye nhare mbozha, Google Workspace (Yaimbova G Suite), Exchange, Microsoft 365.
Iko hakuna kupokana kwekubudirira kweESM. Kudzoka kwekudyara kweESM kwakakura - Newoldstamp yaona kusvika pa 34,000% inodzoka mukudyara papuratifomu yavo. Aya mapuratifomu anokwanisa kushandiswa kutsaura chikamu chekutaurirana zvichibva pabasa revashandi vako uye kunyatso tarisa mhinduro yemushandirapamwe iwoyo.
Maitiro Ekutangisa Inobudirira Email Siginecha Kushambadzira Campaign
Chikwata kuNewoldstamp chakagadzira iyi nhanho-nhanho infographic iyo inofamba iwe kuburikidza nematanho manomwe ekutanga mushandirapamwe wakasainwa weemail.
Tsvaga nzvimbo yemasaini emaimeri mune yako nzira yekutengesa
Chikamu vateereri vako
Tsanangura email siginicha yekushambadzira zvinangwa
Gadzira email siginicha dhizaini neiyo brand mupfungwa
Ronga mishandirapamwe yako
Tevera yako email siginecha kushambadzira mishandirapamwe
Gadzirira mishandirapamwe zvinoenderana neiyi data
Saina Chikwangwani cheNewoldstamp
Kuzivisa: Ndiri kushandisa chakabatana chinongedzo che Google workspace.
Tags: Active directoryctaemail signatureemail siginecha manejimendiemail siginecha kushambadziraemail siginicha chikuvaesmExchangegoogle workspacewedzera kutendeukainfographicmicrosoft exchangeMicrosoft Officenewoldstampoffice 365